Sheekada Filimka Geetha Govindam: Waa mid ka mid ah aflaanta jaceylka dagan ee ugu wanaagsan Telugu sameeyaan – Filimside.net
Sheekada Filimka Geetha Govindam: Waa mid ka mid ah aflaanta jaceylka dagan ee ugu wanaagsan Telugu sameeyaan
August 28, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: August 28, 2018
Vijay Deverakonda xiligaan wuxuu ka mid yahay atoorayaasha Telugu (Tollywood) ugu saameynta badan suuqiisa iyo magaciisana cirka marayaan.
Vijay Deverakonda magacaas marka la maqlo waxaa qasab ah in la is weydiiyo qaabkii uu u matalay filimkii Classic ahaa Arjun Reddy ee Blockbuster-ka weyn noqday sanadkii hore markaana wuxuu la yimid mashruuc kale oo maqaamkiisa meel sare sii gaarsiiyay.
Filimka Geetha Govindam waxaa tiyaatarada la saaray 15-kii bishan August gudaha Hindiya halka 14-kiii bishan la saaray tiyaatarada USA ama Mareekanka.
Jilaayaasha filimka GG: Vijay Deverakonda iyo Rashmika Mandanna oo hogaamiyaal ah waxaana caawinayaan Subbaraju, Rahul Ramakrishna, Vennela Kishore, Naga Babu iyo kuwo kale.
Qiimeynta filimkan: 4/5 (Afar xidig)
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 2-daqiiqo.
Fariinta filimka GG Oo Kooban: Govind (Vijay Deverakonda) waa Ingineer cashar ka bixiyo wuxuuna sugayaa weli inuu helo gabadhii u qalantay nolosha inay la wadaagto.
Govind (Vijay Deverakonda) wuxuu jaceyl u qaadayaa Geetha (Rashmika) oo ah gabbar Software Ingineer ah aadna ugu dheereyso barnaamijyada casriga ah ee shirkadaha waa weyn ku shaqeestaan.
Waqtiga ayaa isku soo aadinayo Govind (Vijay Deverakonda) iyo Geetha (Rashmika) inay hal habeen waqti ku wada qaataan safar ay bas ku galayaan halkaasna safarkooda si fahan wacan ayaa ku dhex maraayo.
Balse Govind (Vijay Deverakonda) hal qalad oo uu Geetha (Rashmika) ka galo ayaa xiriirkooda bur burinaayo wuxuuna marwalbo ku guul dareesanayaa inuu saxo qaladaadkiisa taasi oo sababeyso talaabo walbo oo uu qaado in Geetha (Rashmika) kasii fogaato.
Sidoo kale Govind (Vijay Deverakonda) oo noloshiisa gaarka ah xal u waayay waxay isku dhacayaan ama xiriirkooda xumanaanayaa aabihiis (Naga Babu) iyo wiilka dhawaan noqon rabo seedigiis Subba Raju.
Filimkan qeybihiisa dambe waxaa loo daawan doonaa sida Govind noloshiisa dhinac walbo iska soo xir xirtay u fur furi lahaa asigoo jecel inuu guursado sidoo kalena xiriirka reerkiisa wanaajiyo.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Geetha Govindam: Waa filim mada daalo dhameestiran leh dhanka heesaha, qaabka fariinta la isugu daba riday, sheekadiisa wacan iyo dareenka qiirada leh.
Si gaar ah Director Parasuram wuxuu ku dadaalay dhalinta mashruucaan inuu soo jiito wuuna ka dhigay madaama hogaamiyaasha filimkan aad isugu soo baxayaan qaab jiliin ahaan iyo bandhig ahaan.
Bandhiga Jilaayaasha Filimka GG: Inaba caadi ma ahan Vijay Deverakonda bandhiga iyo muuqaalka uu la yimid waa mid 100% cagsi ku ah qaab jiliinkiisii iyo muuqaalkiisii filimka Arjun Reddy weliba filimkan wuxuu ku kasbaday qoysaska asigoo muujiyay waji dabacsan inuu matali karo madaama wajigiisii adkaa ee Arjun Reddy lagu xasuusto marwalbo.
Rashmika si heer sare ah ayay doorkeeda kaga baxsaday weliba iyada iyo Vijay wey isku soo baxayaan waxayna noqdeen lamaanaha shaashada ugu soo jiidashada badan Tollywood xiligan marka laga cabir qaato bandhiga ay filimka GG ka sameeyeen.
Dhamaan jilaayaasha kale ee filimkan doorka caawiyaha muhiimka ah ku leh wey ka baxsadeen waxayna ugu jiraan shaashada micno filimkan horey usii dhaqaajinaayo sheeko ahaan iyo xiiso ahaan.
Gunaanad: Filimka GG waa mid heer sare ah oo si wacan looga shaqeeyay taasina waxay sababeysaa in daawashadiisa laga daalin wuxuuna ka mid noqday aflaanta jaceylka dagan ee Telugu (Tollywood) sameeyaan kuwooda ugu wanaagsan. Run ahaantii Vijay Deverakonda waa xidig Telugu usoo baxay marwalbana fariin maangal ah oo daawadayaasha soo jiidaneyso la imaanayo.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska kooban filimka Geetha Govindam ee aadka looga wada helay:
Waxaa Aqrisay 1,650